ဘောလုံးဟောကိန်းများ Tianjin Teda vs Shanghai Shenhua 22 July 2021
ရေနံချောင်း ခန့်မှန်းချက် — 3ခန့်မှန်းချက်များ
1xPlayz (73.84% ရေနံချောင်း / 864) Shanghai Shenhua အနိုင်ရသူ
BallkhmerBettor (52.46% ရေနံချောင်း / 650) Shanghai Shenhua အနိုင်ရသူ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Tianjin Teda vs Shanghai Shenhua ဒီ၏ Jul 22, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် တရုတ်စူပါလိဂ်
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Tianjin Teda vs Shanghai Shenhua?
များအတွက်ဘောလုံးဟောကိန်းများကဘာလဲ Jul 22, 2021?
၏နှိုင်းယှဉ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲခန့်မှန်းချက် Jul 22, 2021
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Tianjin Teda vs Shanghai Shenhua အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ တရုတ်စူပါလိဂ် of Jul 22, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Tianjin Teda အနိုင်ရ၊ Shanghai Shenhua အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် A. Mierzejewski
၏ရည်မှန်းချက် Kim Shin-Wook
၏ရည်မှန်းချက် Zhao Yingjie
အစားထိုး Magno Damasceno Santos da Cruz
အားဖြင့် Xie Weijun
အစားထိုး J. Iloki
အားဖြင့် Zhou Tong
အစားထိုး Chen Kerui
အားဖြင့် Cong Zhen
အစားထိုး Yu Hanchao
အားဖြင့် Bi Jinhao
အစားထိုး G. Moreno
အားဖြင့် C. Bassogog
အစားထိုး Wen Jiabao
အားဖြင့် Zhang Lu
အစားထိုး Zhu Baojie
အားဖြင့် A. Mierzejewski
အစားထိုး Sun Shilin
အားဖြင့် Kim Shin-Wook
၏ရည်မှန်းချက် Cao Yunding